Mu’assasada SAFA oo ku baaqday in laga qeyb qaato fidinta diinta Islaamka – Radio Muqdisho
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda ayaa maanta ka qeyb galay kulan ay soo qaban qaabisay Mu’assasada SAFA ee dacwada iyo horumarinta, kaasi oo looga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay mu’assasada.
Kulanka waxaa kaloo ka qeyb galay Guddoomiyaha hay’adda culimada Soomaaliyeed iyo mashaa’iq kale waxaana shirkaasi ujeeddadiisu ahayd dhismaha Maamul cusub oo ay Mu’assasadu yeelato, kor u qaadista iyo dar dargelinta dacwada.
Guddoomiyihii hore ee Mu’assasada SAFA ee dacwada iyo horumarinta Sheekh Abuubakar oo maanta xilkiisa ku wareejinayay Guddoomiyaha cusub Sheekh Maxamed Muuse Maxamed ayaa tilmaamay in waxyaabo badan ay u qabsoomeen intii uu xilka hayay.
Sheekh Maxamed Muuse Maxamed Guddoomiyaha cusub ee Mu’asssasada SAFA oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay ayaa ku baaqay in dhamaan Ummadda Soomaaliyeed uu xasuusinayo Madax iyo shacabba in ay xil iska saaraan dacwada Islaamka, faafinta aqoonta diinta iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Guddoomiyaha Hay’adda Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bahiir Axmed Salaad oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa ku booriyay mas’uuliyiinta Mu’assasada SAFA in ay sii xoojiyaan dacwada Diinta Islaamka, dadkana ay ku dhiirigeliyaan qabsashada xarigga Alle.
Wasiir ku-xigeenka Diinta iyo Awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Yuusuf Xeyle Jimcaale oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan howlaha ay mu’assada hayso, isagoo intaa ku daray in mu’assasada ay Wasaaraddu aqoonsi rasmi ah ka haysato.
Xuska maalinta Naafada Adduunka oo lagu qabtay Muqdisho (DAAWO MUUQAAL)